Wanta Gati-jabeessa Fudhachuu Dura Gatii Kaffalamu – Araratv
Home > Press > Ergaa > Wanta Gati-jabeessa Fudhachuu…
Wanta Gati-jabeessa Fudhachuu Dura Gatii Kaffalamu
2Phe. 1¯¯¯¯³ Nuyi, Waaqayyo isa ulfina isaa fi humna isaa isa dinqisiisaadhaan nu waame beekuu bira ga’uudhaan wanta nu barbaachisu hundumaa arganneerra. Gooftaan humna waaqayyummaa isaatiin gara jireenyaatti nu geessuuf, namoota Waaqayyoo nu godhachuudhaaf kana hundumaa nuuf kenneera. ⁴ Kennaa kanaan isin badiisa, isa sababii kajeellaa fooniitiif biyya lafaa kana keessa jiru jalaa baatanii, dhagna hafuuraa isa kan Waaqayyoottii hirmaattuu akka taataniif abdiin gati-jabeeyyiinii fi gurguddoonni nuuf kennamaniiru.⁵ Ammas dhama’uu hundumaan dhama’aa! Amantii qabdan gaarummaadhaan argisiisaa, gaarummaa keessaan beekumsa argisiisaa! ⁶ Itti dabaltanii immoo beekumsa keessaan of qabuu, of qabuu keessaan obsaan danda’uu, obsaan danda’uu keessaan nama Waaqayyoo ta’uu keessan argisiisaa! ⁷ Nama Waaqayyoo ta’uu keessaan obboloota jaallachuu, obboloota jaallachuu keessaan nama hundumaa jaallachuu argisiisaa!
Utuu gatii hinbaasiin wanti fudhatamu hinjiru.
Erga gatii baasanii booda wanta gatii qabutu argama.
Inni araarasaa isa guddaadhaan Kiristoos Yesuusiin warra du’an keessaa kaasuusaatiin abdii kanatti qabamnee akka jiraannuuf haaraa godhee nu dhalachiiseera.
Waan hin badne
Waan xurii hinqabne
Waanta gad-deebi’aa hinadeemnedha
Abdii kanatti darbinee akka fudhannuuf godheera.
Wanta gad-deebi’aa hinadeemne, waan xurii hinqabne, waan hin badne isaan kana fudhachuudhaaf gatiin baafamu yookiin kaffalamu jira.
Qorumsa garagaraatiin erga ilaalamanii boodadha wanta gati-jabeessa kana kan harkatti fudhatan.
Warqeen warqummaansaa kan beekamu erga ibidda lixee ba’een boodadha.
Utuu ibidda hingaliin warqummaansaa hinbeekamu.
Warqeen ibidda keessa gaafa galu ingubata utuu hintaane itti ba’a; itti ba’ee bareeddinnisaa mul’ata.
Amantii keenya inni warqee caala gati-jabeessa ta’e guyyaa Yesuus Kiristoos mul’atutti gatii argatuuf qoramuutu isarra jira.
Karaan kiristiyaanummaa karaa qorumsaati.
Jireenya isa tola jiraannu kana Yesuus itti qoramee, itti dafqeefi itti du’ee nu biraan ga’e.
Wanti gatii guddaa qabu kun aarsaa du’aa booda dhufe.
Ibr. 2:18 “Inni waan ofii isaatii dhiphatee, qoramee arge keessatti, warra qoramni itti dhufu gargaaruu in danda’a.”
Qorumsi seexana qofaa biraa dhufa miti; Waaqayyo ofiisaatii nama ilaaluudhaaf nama qora.
Kes. 8:2 “Waaqayyo gooftaan keessan gad isin deebisuudhaaf garaa keessan keessa waan ture, abboommii isaa in eegduu fi hin eegdanii keessan beekuudhaaf, qoree isin ilaaluudhaafis jedhee, karaa inni lafa onaa sana keessa waggaa afurtama kana isin adeemsisaa ture yaadadhaa!”
Waaqayyo ofiisaatii qoree nu ilaala.
Akka nuti isatti jirruufi hinjirre akkasumas akka abboommiisaa eegnuufi hineegne ilaaluudhaaf qoree nu ilaalaa.
Fak. 17:3 “akkuma meetiinii fi warqeen qodaa itti baqfaman keessatti qoraman, Waaqayyo garaa namaa in qora.”
Qorumsa keessa ulfina Waaqayyotu mul’ata.
Amantii namaatu guddata.
Namni isa durii caalaa Waaqayyotti siiqee fira Waqayyoo ta’a.
Waaqayyo gaafa qorumsa namatti fidu; humna namaatiin ol nama hinqoru. Yoo namatti fides karaa ittiin keessaa ba’an namaa qopheessa.
1Qor. 10:13 “Qoramni namatti dhufee hin beekne isinitti hin dhufne. Waaqayyo amanamaa waan ta’eefis, humna keessan gararraatti akka isin qoramtaniif isin hin dhiisu, garuu qorama sana keessatti akka isin dandeessan in godha, karaa isin keessaa baatanis isiniif in kenna.”
Bu’aan Qorumsaa maalidha?
1. Qulqullina Hafuuraa Fida (It Brings Spiritual Quality)
Warqeen akkuma gaafa ibidda keessa lixu itti ba’u. Kiristiyaanni qorumsa keessatti incima, itti ba’a, qulqullina hafuuraatu argama.
Iyo. 23:10 “Haa ta’u iyyuu malee, inni karaa koo in beeka, yeroo inni qoree na ilaaluttis akka warqeetti nan ba’a.”
Qulqullinni hafuuraa kan dhufu qorumsaan ilaalamanii erga darbanii boodadha.
Kiristoosuu jireenya bara baraa kana kan fide; ibidda du’aatiin ilaalamee erga darbeen boodadha.
2. Qullaa’ummaa Fida
Isa. 48:10 “Kunoo, akka meetiitti yoo ta’uu dhabaatte iyyuu, si qulleessuudhaaf rakkina isa akka ibiddaatiin ani si qoreera;”
Mil. 3:3 “Inni akka nama sibiila baqsuutti, akka nama meetii qulleessuuttis taa’ee warra Lewwootaa baqsee akka warqee fi akka meetiitti isaan in qulleessa; isaanis warra Waaqayyoof aarsaa qajeelaa dhi’eessan in ta’u.”
Warqeen ibidda gaafa galu xurii isarra jiru, biyyoo irra jiru, ibidda keessaatti dhiisee qullaa’ee akkuma ba’u; akkasuma sibiillis ibidda gale keessatti haara’ee, qullaa’e akkuma ba’u kiristiyaanni qorumsa guddaa keessatti qullaa’a.
Zak. 13:9 “harka sadii isa hafe sanas ibidda keessa buusee, akka meetii fi akka warqeetti qoree nan ilaala; yommuu isaan maqaa koo waammatan, ani immoo isaaniif nan dhaga’a; ‘Isaan saba koo ti’ nan jedha; isaanis, ‘Waaqayyo gooftaa keenya’ in jedhu” jedha.”
3. Namni Qorumsa Keessatti; Caalaa Seera Waaqayyoo Bara
Far. 119:71 “Seerrata kee akkan barutti, rakkifamuun anaaf gaarii dha.”
Namni gaafa fayyatti jiru caalaa gaafa dhukkubsatu; caalaa Waaqayyoon bara. Akkasumsa namni gaafa fayyatti jiru caala gaafa rakkatu; oolchuu Waaqayyoo bara.
Bakka Jijjiirama Ofii…